Ivory Coast: Guillaume Soro သည်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သလား။ - Jeune Afrique - Teles Relay
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဆယ်ရက်အလိုတွင်၎င်းအနေဖြင့်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုတရား ၀ င်ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျိန်ဆိုခြင်းတို့ပြုလုပ်သောကြောင့် Guillaume Soro သည်ရှုပ်ထွေးသော Ivorian ညီမျှခြင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ သူသည်ပါရီမြို့ရှိပြည်နှင်ခံရပြီးကတည်းကသူသည်မဲအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သလော။
သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သတင်းစာဆရာများကိုဆက်ဆံရန်ဗီယင်နေးစားနှင့်လိမ္မော်ဖျော်ရည်များကိုညှစ်။ လိုက်သည်။ ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ပဲရစ်မြို့၊ ဘရစ်စတိုဟိုတယ်၏ reception ည့်ခန်းကျယ်၌ဖြစ်သည်။ Guillaume Soro သည်သူ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်သိသိသာသာသက်သာသွားသည်။
အိုင်ဗရီယန်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကpresident္ဌဟောင်းသည်သူ၏အကြိုက်ဆုံးပန်းတိုင်များဖြစ်သော Alassane Ouattara၊ သူ၏တတိယသက်တမ်းစီမံကိန်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကောင်စီ၊ သူ၏တတိယမြောက်ရင်ဘတ်ဝတ်စုံကိုပြုံးပြီးအနားယူလိုက်သည်။ သူ၏သမ္မတလောင်းပယ်ချခဲ့သည် Forces Nouvelles ၏ပုန်ကန်မှုခေါင်းဆောင်ဟောင်းသည်သူကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေရန် "အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ကုတ်အိုင်ဗွီတွင်ရွေးကောက်ပွဲမရှိနိုင်" ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ "ပြောပါ, ရေးပါ! သူကသူ့သတိထားပရိသတ်ကိုတိုက်တွန်းသည်။
Abidjan တွင်၊ အင်ဒီယာကွန်န်ဘက်ဒီနှင့်အဓိကအတိုက်အခံအင်အားစုများသည်အော့ဖ်အိုင်ဗွီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (PDCI) ၏ဌာနချုပ်ရှိစာနယ်ဇင်းများကိုအပြန်အလှန်စကားပြောခဲ့ကြသည်။ ရပ်တည်ချက်တွင်သူ၏ "၈၆ နှစ်" အမြင့်ဆုံးရှိ "Souphinx of Daoukro" သည်ထိုးစစ်များဆင်နွှဲနေသည်။ "Alassane Ouattara ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, တစ်ခုတည်း watchword: လူထုမနာခံမှု! "
Guillaume Soro နှင့်သူ၏အဖွဲ့ ၀ င်အရက်သောက်ကြသည်။ သူသည်ပါရီမြို့မှပြည်နှင်ခံရပြီးနောက် Generations and Solidarity Peoples (GPS) ခေါင်းဆောင်သည်ကျန်အတိုက်အခံများအတွက်လေသံကိုထင်ဟပ်စေသည်။ သူက“ ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာပြီ။ သူတစ်ပါးရှေ့တွင်မြင်ခဲ့ရသည့်အရာများ၊ အတိုက်အခံတစ်ခုလုံးသည်ယခုအခါ၎င်း၏အနေအထားနှင့်ကိုက်ညီပြီး Ouattara ကိုဆန့်ကျင်။ ပြန်လည်စုစည်းနေသည်” ဟုသူ၏ဆွေမျိုးတစ် ဦး ကပြောသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.jeuneafrique.com/1061814/politique/cote-divoire-guillaume-soro-peut-il-bouleverser-la-presidentielle/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux- တွင် rss- ငယ်ရွယ် - အာဖရိက -15-05-2018
Tele RELAY တစ်ခု 30600 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ